Taiwan: Puncar Mampihena Ny Hantsana Nomerika · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 30 Oktobra 2017 5:05 GMT
(Marihina fa tamin'ny 6 Jona 2008 no nanoratana ny lahatsoratra teny Anglisy)
Mianoka ambaratongam-pandrosoana tsara i Taiwan ary raha ampitahaina amin'ireo faritra hafa amin'izao tontolo izao ilay nosy dia heverina ho manana zo mitovy ihany ny mponina ao aminy. Saingy mbola lalina ny hantsana nomerika misy eo amin'ny tanàndehibe sy ny ambanivohitra. Tetikasa maro no miezaka manarina izany. Ny Tetikasa fampiasana indray sy fifanakalozana ireo solosaina efa niasa (电腦 回收 轉贈 計畫) izay natsangana sy notontosain'ny sampan-draharaha Fiarovana ny Tontolo Ianinana (行政院 環保署) dia manangona ireo solosaina tranainy ary manamboatra izany mba ho zaraina any ambanivohitra sy ny sekoly. Nanomboka nanomana atrikasa fampiofanana momba ny teknolojia vaovao any amin'ireo vondrom-piarahamonina sahirana ihany koa ny Vondrom-piarahamonina Nomerika (數 位 好 厝 邊), natsangan'ny Orina Mpanasoan'ny Orinasa Chunghwa Telecom (中華 電信 基金會),.
Tsy ampy anefa ny manana solosaina sy fifandraisana amin'ny Aterineto fotsiny: mila mianatra ireo fahaizana fototra ampiasaina amin'ny teknolojiam-baovao ny olona. Nanomboka hetsika vaovao antsoina hoe “Puncar” (胖 卡) ny Fikambanana mampiroborobo ny kolontsaina nomerika ao Taiwan (ADCT ) (台灣 數 位 文化 協會) mba hanampiana ireo olona mitoka-monina any amin'ny faritra ambanivohitra sy ireo foko vitsy an'isa mba hianatra hampiasa ny fitaovana amin'ny aterineto (bilaogy, Twitter, Google Maps, tambajotra sosialy toy ny Facebook, sns.) .
Manana fakantsary, solosaina, takela-masoandro, sns ity fiara efa tranainy 10 taona ity, na dia tsy afaka mihoatra ny 80-90 km/ora intsony aza izy. Tamin'ny volana Mey 2008, nanentana atrikasa fampiofanana tany amin'ireo tanànakely lavitra sy ho an'ireo foko vitsy an'isa any atsimo sy atsinanan'i Taiwan ireo mpirotsaka an-tsitrapo nandritra ny faran'ny herinandro telo .
Nivory ireo mpandray anjara tamin'ny sokajin-taona rehetra
tao amin'ny foiben'ny kaominina fanaovana atrikasa fampiofanana
Nitatitra momba ny atrikasa tao amin'ny bilaoginy ny mpianatra iray, A-shan (阿珊):
Nandray fitenenana teo amin'ny lampihazo i Tim (talen'ny ADCT) ary nanazava ny atao hoe bilaogy, ny fampiasana izany sy ny zavatra azo atao aminy. […] Nanetsika ny ‘totoziny’ ireo mpandray anjara ary namerina izay naseho azy ireo sy niezaka nanatsara izany tsikelikely.
Nanoratra momba ny traikefany tamin'ny tetikasa Puncar i Philsu (阿寬), mpirotsaka an-tsitrapo izay nanatevin-daharana ny asa nandritra ny herinandro faharoa:
Nianatra zavatra maro tokoa aho rehefa nifandray tamin'ireo ankizy ireo. Nanova ny fahazarako sy ny fomba fijeriko ilay zavatra niainako, ary nahatonga ahy nanontany tena imbetsaka. Ora vitsivitsy monja no niarahanay tamin-dry zareo, tamin'ny fampianarana azy ireo ny fampiasana ny sarintany antserasera sy ny bilaogy, kanefa raha ny marina dia ry zareo no tena nampianatra ahy zavatra maro.
Namoaka antserasera ny sariny rehetra tao amin'ny rakitsary Flickr i Qweaz (陳 力), mpamily sady mpakasarin'ny tetikasa Puncar.
Nanoratra tao amin'ny bilaogin'ny tetikasa Puncar i Tim Shyu (徐 挺 耀), talen'ny ADCT:
Handray mpilatsaka an-tsitrapo mavitrika sy za-draharaha maro ny Puncar mba hampivelatra ny atrikasa fampiofanana amin'ny Aterineto ho mahaliana kokoa miaraka amin'ny fitaovana mora ampiasaina kokoa. Nitsidika tanànakely samihafa izahay, nampiasa ireo fitaovana efa nisy ary nanampy tamin'ny famahana ny olan'ny fampiofanana tamin'ny aterineto. Mandritra ny fitsidihana, hanombatombana ny toerana ara-toekarena ao amin'ireo faritra ambanivohitra ny Puncar ary hanolotra vahaolana ara-teknolojia sy fanampiana mifanaraka amin'izany.
Haharitra telo taona farafahakeliny ny tetikasa Puncar. Rehefa vita ny fisidinana voalohany ny volana May dia hiverina indray izahay amin'ny volana Jolay. Raha mila fanazavana bebe kokoa dia azonao atao ny manontany ny ADCT amin'ny: admail.npo arrobase gmail.com.
Navoaka tamin'ny alàlan'ny lisansa Creative Commons ny sary rehetra